Dowladda: Warbixinta QM waxey ku saleysantahay Sheekooyinka fadhi ku dirirka | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda: Warbixinta QM waxey ku saleysantahay Sheekooyinka fadhi ku dirirka
Muqdihso (KON) - Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa wallaac ka muujisey warbixintii ay dhowaan guddiga dabagalka Xayiraadka Hubka Soomaaliya iyo Eretria oo khaladaad fara badan oo qaarkood iska horimaanaya iyo arrimo aan sax aheyn ay key jireen.
Dowladda waxey ku baaqday in wadatashi lala sameeyo dowladda iyo in la abuuro guddi dhex-dhexaadin ah oo la horgeeyo arrimaha qaldan inta aan warbixinta la shaacin.
Af-hayeenka Madaxtooyada Abdirahman Omar Osman (Eng. Yarisow) oo maanta saxaafadda kula hadlay Muqdisho ayaa yiri “ Warbixintan waxaa ku jira arrimo fara badan oo tixgelin u baahan. Waxaan ku faraxsannahay aqoonsiga guddiga QM ee ah in Dowladdu ay si fiican ula shaqeysey, tan oo tusaysa sida ay nooga go’antahay furufrnaanta. Hase yeeshee waxaan aad iyo aad uga xunnahay Guddigan QM inuu ku guuldarreystey inuu dowladda kala hadlo warbixintooda iyo go’aanaddooda si aan u gudbino jawaabaheeena ka hor inta aan la baahin warbixinta.
“Waxaa muuqata in warbixinta lagu saleeyey xan, sheekooyinka fadhi ku dirirka, iyo ku tiri-ku-teen, kuwaas oo dhaliyey inay soo baxdo warbixin aan dhex-dhexaad aheyn oo eedeyn aan sal iyo baar toona laheyn ku fadhisa loo baahiyey caalamka oo dhan.
“Warbixinta sida guracan lagu keenay waxey tuseysaa oo caddeyneysaa sida Guddigan QM uu ugu guuldareystay inuu u fahmo xaaladda dhabta ah ee dalka ka jirta. Warbxintan waxey qatar ku tahay nabadda iyo xasilinta dalka.
“Dowladda Federaalka waxey codsaneysaa in Golaha Ammaanka ee QM ay sameeyaan inay dhacdo wadatashi laga yeesho warbixinta iyo inay sameeyaan guddi dhexdhexaad ah oo warbixinnada mustaqbalka tixgeliya jawaabaha dowladda iyo in warbixinnada khaladka ah laga saaro warbixinada inta aan la daabicin.
“Tani waxey muhiim u tahay nabadda iyo xasilinta dalka iyo sumcadda QM si warbixinnada mustaqbalka ay u noqdaan kuwa ku dhisan xaqiiqda oo la hubiyey isla markaana dhex-dhexaad ah.
“Waxaan ku faraxsannahay in warbixintu ay xoogga saartay kooxaha Al-Shabaab oo khatar ku ah dalka iyo qaswadayaasha kale. Kuwaan oo khatar nagu wada ah una baahan inaan ciribtirno.
“Waxaana ku faraxsannahay in burcad-badeedu ay yaraatay, waxaana ka wallaacsanahay dambiilayaasha oo kordhay. Waxaana noo taalla shaqo badan oo aan ummadda u abuureyno shaqooyin iyo nolol si looga fogaado falalka dambiyada ah.
“In lagu tilmaamo Bankiga Dhexe mid si shaqsi ama gaar ah loo isticmaalo oo habka “Fadlan” ka ah loo isticmaalo, waa mid aan sax aheyn oo sharaf ka dhac ku ah Soomaalida sida aadka ah u shaqeysata oo duruufo adag ku shaqeeya si dalku uu dib ugu dhismo.
“Habka ay ugu yeereyn “Fadlan” oo shaqsiyaad wax lagu siiyo ma aha mid jira oo xaqiiqada ayaa ah in si sharci ah ay ku baxaan lacagaha oo wasaaradaha iyo hay’adaha dowladda ku baxa oo aan heysan nidaamka caalamka oo ay tahay in hay’adahu ay shaqsiyaad loogu tala galay u soo qaadaan lacagahooda.
“ Haddii ay guddigan QM imaan lahaayeen Muqdisho oo ay si dhab ah u fiirin lahaayeen sida lacagaha loo xareeyo iyo nidaamka lagu bixiyo waxey arki lahaayeen sida sharciga ah ee uu Bankiga u shaqeeyo.
“Waxaan bilownay nidaamka iyo shuruucdii haggaajinta dhaqaalaha, oo aan la shaqeynaa hayadaha Bankiga Adduunka iyo hay’adda lacagta Adduunka (IMF).
“Waxaan ku dadaalnaa inaan horumar weyn ka sameyno maamulka iyo maareynta maaliyadda, oo bilihii la soo dhaafay waxaan ku guuleysanay:
Inaan maamulkii iyo maareynta maaliyadda haggaajiney oo aan la shaqeynaa Bankiga Adduunka iyo IMF;
Waxaan dhameystirnay sharcigii maaliyadda oo hadda Baarlamaanka hoyaalla;
Waxaan daabacnay miisaaniyadii oo aan si dhab ah ugu dhaqannaa;
Waxaan dhowaan sameyneynaa Guddigii Maamulka Bankiga
Waxaan u yeerannay Hanti-Dhowr caalami ah si ay u baaraan xisaabaadkeenna;
Bankiga oo aan casriyeyney oo aan u sameyney habkii Swift Code-ka, iyo nidaamkii guud;
“ Madaxweynahu aad buu uga hadlay sida aan loogu dulqaadan karin musuqmaasuq, waxaana sameyn doonnaa baaritaanno la xiriira falalka musuqmaasuqa oo aan tallaabo ka qaadi doono cid allaale iyo ciddii ay ku caddaato.
“Ma dafireyno inay jiraan caqabdo dhanka khibradda ah, hase yeeshee waa naga go’antahay inaan sii dedejino horumarka dhanka maaliyadda. Hay’adahu waa mihiim, waana inaan sii dhisnaa hay’ado lagu kalsoonaan karo.
“Ma aha in la is tuso in sanad gudihiisa wax walba lagu bedeli karo, waqti beyna qaadaneysaa inaan isbedel dhab ah la nimaadno oo horumarka aan sameyneyno waa mid soo soconaya.
Warsaxaafadeed - Xafiiska Madaxtooyada Soomaaliya